Izvi zvakapusa kero yemasuodzinofambiswa chete nebhatiri. Vazhinji vedu Masuo emikova zviri patent zvigadzirwa. Kuti tidzivise kubiridzira, hatina kuisa zvakawandisa pawebhusaiti. Unogona kutaura nevashandi vedu vekutengesa kuti vakutumire ruzivo rwakadzama nezve yedu makonhi emikova.
Huwandu hwevapfuuri kuyerera parizvino ndiye mukuru mutungamiri mumusika. Pasi pesimba renzvimbo, nharaunda, traffic uye zvimwe zvinhu, kuongororwa uye huwandu hwehuwandu hwevapfuuri kuyerera kunogona kuitwa nesainzi uye zvine mutsindo, uye sarudzo dzekushanda pamusika wese dzinogona kuitwa nenzira yakakodzera, iyo yave kugadzirisa. Basa rakakosha remusika bhizinesi modhi, kushandiswa kwesainzi nzira kuunganidza vafambi kuyerera data inzira yekubata mikana yebhizinesi yemusika wese.
HPC001 musuo kero ndeyekuverenga mudziyo wekuverenga vafambi kuyerera. Iyo diki, yakajeka, uye yakapusa kuisa. Inopawo yakazara data manejimendi. Kuti uwane zvinodikanwa zvakasiyana zvevatengi, inoiswa uye inoshandiswa muzvitoro, zvitoro, uye masuo ese ezvitoro. Yakagadzirwa, HPC001 makonhi emikovainogona kuverenga nyore nyore huwandu hwevapfuuri kuyerera panguva yega yega yezuva, iri nyore kupa vatengesi renongedzo. Kubudikidza neshanduko mukuyerera kwevanofamba, nzvimbo yese inogona kugoverwa zvine musoro, zviwanikwa zvevanhu zvinogona kurongwa zvine musoro, uye mitengo yekushanda yezvitoro nezvitoro inogona kudzorwa. Nekufananidza kuyerera kwevanofamba munguva dzakasiyana, kushambadzira uye nzira dzekusimudzira dzinogona kugadziriswa, izvo zvinowedzera zvakanyanya zvido zvezvitoro. Inokodzera nzvimbo dzekutengesa, tsika nemitambo nzvimbo, nzvimbo dzevaraidzo, nzvimbo dzeruzhinji nedzimwe nzvimbo.
Zvimiro zve HPC001 masuo ekuverenga
1. HPC001 kero yemasuo iri Nemitauro miviri yekushandisa, Chinese neChirungu.
2. 1.15 inch LCD skrini.
3. The makonhi emikova bhatiri inogona kutsiviwa yega yega mwedzi mitanhatu yekushanda, iri nyore uye yakapusa.
4.Kunakira kumisikidza uye manejimendi, iyo inogona kushandiswa nemabhatani pakaunda.
5. Iyo kero yemasuo Chete chinoda kuita counter management kuburikidza neWindows, hapana imwe software inodikanwa.
6. Diki saizi (113 * 67 * 20 mm) uye huremu huremu 213 gramu.
7. Chiedza pane makonhi emikova kuratidza kuchapenya kana mumwe munhu apfuura.
8. Inokurumidza ichaonekwa pachiratidziro kana bhatiri riri shoma.
9.Kurumidza kunoonekwa pachiratidziro kana chiratidzo chisina kusimba.
10. Kazhinji kuverenga mukati mehurefu hwe2.5 metres, asi inogona kukwidziridzwa kusvika 9 metres pasina kupindira.
11. Iyo makonhi emikova yemukati ndangariro inogona kuchengeta angangoita maawa mazana mashanu ezvinyorwa.
12. Chigadziko chepurasitiki uye yemubatanidzwa furemu chishandiso inogona kusarudzwa pamadiro.
13. Iyo makonhi emikova Dhata inogona kuburitswa nezuva nenguva.
Tine mhando dzakawanda dze IR kero yemasuo, 2D, 3D, AI musuo vanhu kaunda, panogara paine imwe inokukodzera, ndapota taura nesu, isu tinokurudzira iyo yakakodzera kwazvo kero yemasuo zvako mukati memaawa makumi maviri nemana.
MRB musuwo vanhu vanopokana HPC005 vhidhiyo
Pashure: MRB otomatiki vanhu vanopokana HPC005S
Zvadaro: MRB yekutengesa traffic counter yevatengesi vanhu kuverenga HPC002